'पार्टी पराजयको कारणबारे विमर्श हुँदै जानेछ' : कल्याण गुरुङ - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘पार्टी पराजयको कारणबारे विमर्श हुँदै जानेछ’ : कल्याण गुरुङ
Posted by Milap Subedi | २० बैशाख २०७५, बिहीबार ०८:२० |
भर्खरै सम्पन्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ऐतिहासिक भएको केन्द्रीय सदसय कल्याण गुरुङले बताए । अहिलेको निर्णय सहमतिको दस्तावेज भएको गुरुङको भनाइ छ । सबैको धारणालाई सहमतिको दस्तावेज बनाइएको हो, केन्द्रीय सदस्य गुरुङले भने, ‘निर्णयमा असहमत हुनेहरुका लागि विमर्शको ढोका खुला राखिएको छ ।’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा देखिएको विवादबारे राज ढुंगानाले केन्द्रीय सदस्य गुरुङसँग गरेको कुराकानी–
नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारी चयन किन विवादित बन्यो ?
– भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठक सर्वसम्मत निर्णय गरेर टुंगिएको छ । सर्वसम्मत निर्णय त्यसै भएको थिएन, त्यहाँभित्र प्रयास भएका थिए, सबैको धारणा आए, ती धारणालाई मिलाउने क्रममा कसैको के छुट्यो होला । सम्झौतामा गइसकेपछि सहमतिको दस्तावेज तयार भयो, त्यसलाई केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गरौं भन्ने कुरा आयो । त्यो सहमतिको प्रस्ताव महामन्त्री शंसाक कोइरालाले पढ्नुभो । त्यो प्रस्ताव केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट पास भयो ।
सहमतिको प्रस्ताव भएको त्यही बैठकमा भोलिपल्ट पदाधिकारी चयनको अर्को बैठक आह्वान गरेपछि सबैजना आचम्ममा परेका थिए । भोलिपल्ट डाकिएको बैठक २१ गते पु¥याइएको छ । २१ गतेसम्म छलफल गर्ने, सहमति खोज्ने र सहमतिको प्रयासबाट पदाधिकारी चयन गर्ने प्रस्तावले सकरात्मक संकेत देखिएको छ ।
केन्द्रीय समितिमा भाषा विवाद के हो ?
– चुनावी समीक्षामा सबैको सबै कुरा समेटिएको छैन, सबैको केही कुरा समेटिएका छन् । त्यसकारण यसलाई पार्टीको आधिकारिक फोरम पार्टी जिल्ला सभापतिहरुको भेला, महासमितिको बैठकमा छलफलकै चरणमा लैजानुपर्छ भनियो । पराजयको कारणहरु सम्बन्धमा विमर्श हुँदै जाने छन् भन्ने एउटा बाक्य पछि थपियो । यो बाक्यले त्यही क्लोज गरेन, त्यसले विमर्शको ढोकालाई खुला राख्यो । ता कि हामी आधिकारिक फोरमहरुमा मात्रै विमर्श हुने भयो ।
यो निर्णयमा तपाईंहरुको फरम मत रहेन ?
– सहमति भइसक्यो, निर्णयमा हामीले काहिँ पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छैनौं । यो निर्णयमा हाम्रो सहमति नै हो । पार्टी पराजयको कारणबारे विमर्श हुँदै जानेछ भन्ने जुन लाइन थपिएको छ, त्यसले ढोका बन्द गरेको छैन । विमर्शका लागि ढोका खुला नै राखेको छ । कारण अरु पनि थिए, सबैले भनेका कारण अटाएनन होला, ती विषयमा पार्टीको आधिकारिक फोरममा पछि पनि बहस गर्दै जाने छौं । त्यसको निराकरण, छलफल बहस, विमर्श गर्दै जाने कुरा आएको छ । हामीले संसदीय समिति विघटनको माग राखेका थियौं, कार्यसमिति विधानअनुकूल पुनर्गठन गर्ने भएको छ । महासमितिको बैठक भदौ मसान्तभित्र गर्ने कुरा आएको छ । जिल्ला सभापतिको भेला जेठ मसान्तभित्र गर्ने कुरा आएको छ । विधान संशोधन समिति निर्माण भएको छ । हामीले भनेका धेरै कुरा समेटिएका छन् ।
तपाईंहरुले उठाएको मुद्दा सबै सम्बोधन भयो ?
– हामी १५ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले लिखित रुपमा दिएका ९ बुँदे प्रस्ताव सबै नै सम्बोधन भयो । लिखित प्रस्ताव सम्बोधन भयो, मौखिक धारणा केही सम्बोधन भए केही भएनन् ।
पार्टीलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएन भनिएको छ नि ?
– नेपाली कांगे्रसको यो ऐतिहासिक बैठक हो, जहाँ केन्द्रीय सदस्य १५ मिनेटदेखि लिएर साढे ३ घन्टासम्म आफ्नो धारणा राख्नुभयो । यो ऐतिहासिक केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सबैको धारणा हुबहु आएन होला । सबैको फरक धारणालाई मिलाएर सहमतिमा निर्णय गरियो ।
Previousआज प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईदै
Nextप्रचण्डको दावी : ‘दुई पार्टीको एकता अन्तिम चरणमा’
हिंसात्मक घटना बढेपछि चुनावमा नेपाली सेनालाई सक्रिया बनाउने तयारी
६ मंसिर २०७४, बुधबार ०९:०३
प्रकाश अर्यालको विदाई , सर्वेन्द्र र शैलेन्द्रले आज फुली लगाउने
२९ चैत्र २०७४, बिहीबार ०७:२६
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सक्न विकास समितिको निर्देशन
१५ श्रावण २०७४, आईतवार १८:३४
जागिर खोसिएको चिठी १५ जनालाई पठाईयो, नेपाल प्रेस युनियनद्धारा आपत्ति
२४ असार २०७५, आईतवार १४:५४